Human Right | ရောသမမွေ
အကြပ်အတည်းကြားက ကေအန်ယူ March 21, 2009
မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခြင်း မရှိသေးသည့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ၎င်း၏ မာနယ်ပလော ဌာနချုပ် ကို လက်လွှတ်ရပြီး နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်း အင်အား လျော့နည်းလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များအတွင်း KNU ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ် စောဘိုမြကွယ်လွန်ခြင်း၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လုပ်ကြံခံရခြင်းတို့နှင့်အတူ KNU၏ ထိန်းချ […]
Pakistan ex-PM ignores ‘arrest’ March 15, 2009
Pakistan opposition leader Nawaz Sharif has defied an apparent house arrest order to head foraprotest in Lahore. Describing the order – denied by the government – as “illegal” he left his Lahore home urging people to join him. Police fired tear gas at the stone-throwing protesters who plan to march to Islamabad to […]
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိုဘားမား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနှင့် ဆွေးနွေး March 14, 2009
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေးပြဿနာနဲ့ တခြားကိစ္စရပ်တွေ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမား ဟာ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံနဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်စကား ပြောခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်တိုးတက်လာစေဖို့ နိုင်ငံတကာရဲ့အားထုတ်မှုမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သမ္မတ အိုဘားမား က ခေါင်းဆောင […]
Hello world! March 14, 2009
စံပြကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်ခံရ March 16, 2009
3/15/2009 ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နတလ စံပြကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးကို မူဆလင်ဘာသာဝင် ၅ ဦးက မတ်လ ၁ ရက်နေ့က မုဒိမ်းကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သတ်ဖြတ်ခံရသူ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးမှာ ဦးမောင်မောင်သန်း (၄၈) နှစ်၏ သမီးနှစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တောင်ဘဇားကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသော သရဖီ စံပြကျေးရွာမှ ဖြစ်သည်။ ဦးမောင်မောင်သန်း၏ သမီးအကြီးမှာ […]
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အိုဘားမား အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနှင့် ဆွေးနွေး March 15, 2009
Hello world! March 15, 2009
Carbon-neutral goal for Maldives March 15, 2009
Carbon-neutral goal for Maldives Beach in the Maldives One-third of the Maldives’ economy depends on tourism The Maldives will become carbon-neutral withinadecade by switching completely to renewable energy sources like wind and solar power, its leader has said. President Mohamed Nasheed told the BBC the Maldives understood better than most what would happ […]
Posted on March 14, 2009 by moemoe650
Filed under: daily new, Human Right |	Leaveacomment »
မိတ်ဆက် Select Category daily new (2) Human Right (1) Uncategorized (2)
G20 summit ‘critical for economy’
ABOUT • BIOS • VISIT THE OFFICIAL WORLD NEWS AMERICA SITE
RFA (English new)
ဘီဘီစီ ( မြန်မာ ) သတင်း
Men and Women Working for Gender Equality
Women for Women’s Human Rights-New
THE MOULTRIE OBSEVER